एकताको बल | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
हाम्रो देश शान्तिपूर्ण देश भनेर चिनिन्छ । फेरि यही देशमा तछामछाड भइरहेको छ । त्यसैले पनि मलाई सरकारका कामकाज देखेर दिक्क लागेको थियो । एक दिन हाम्रो दारी ग्याङको एक जना दाइले आफ्नो फेसबुक वालमा प्रदर्शनलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सेयर गर्नुभएको थियो । के होला भनेर हेर्दा सरकारलाई खबरदारी गर्न युवाहरुले प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरा रहेछ । त्यो देख्दा मलाई पनि प्रदर्शन गर्न जानुपर्छ भन्ने भयो । म जस्तै अरुले आफ्नो आवाज उठायौँ भने हाम्रा माग पूरा हुन्छन् भन्ने लाग्यो । किनभने एकतामा नै बल हुन्छ ।
म पहिलादेखि नै सामाजिक काममा लागिरहने भएकोले पनि मेरो काममा मम्मी बुबाले साथ दिनुहुन्छ । कोरोना लाग्ला भन्ने डर थियो तर सामाजिक दूरी अपनाएर प्रदर्शन गर्‍यौँ ।
म दुई पटक प्रदर्शनमा गएको थिएँ । हामीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनेर कुराकानी गरेका थियौं । केही साथीहरुले नारा लगाउने भन्दा हामीले उहाँहरुलाई सम्झायौं । पुलिस प्रशासनबाट हस्तक्षेप भएन ।
दोस्रो प्रदर्शन पनि शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने थियो तर केही समयपछि नारा लगाउन सुरु भयो । मलाई त्यो मन परेन । किनभने शन्तिपूर्ण प्रदर्शन भनेपछि नारा किन लगाउनु ? भीडभाड पनि धेरै थियो त्यो बेला । त्यहाँ विभिन्न पार्टीका मान्छे पनि थिए । त्यहाँ मलाई अरुभन्दा पनि कोरोनाको डर लाग्यो ।
हामी युवाहरु घाम–पानी नभनेर सधैं सडकमा आउनुपर्ने किन ? सरकारका निणर्यको विपक्षमा हामी उभिनुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर प्लेकार्ड बोकेर गएको थिएँ । त्यसमा लेखेको थिए, किन सधैं युवा सडकमा ?
हामी सधैं सरकारको कुरा मान्छौँ । तर सरकार किन सकारात्मक बाटोतिर नगएर नकारात्मकतिर जान्छ । हामी जनताको कुरा सरकारले किन सुन्दैन ? अहिले यस्तो विपत्‌का बेलामा पनि सरकारले छिटो काम गरेको छैन । कोरोना संक्रमितहरु दिनैपिच्छे बढिरहेका छन् । सरकार भने कुरा मात्रै धेरै गरेर बसेको छ, काम कम भएको छ । त्यसैले पनि म आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन स्वतन्त्र रूपमा सडकमा निस्केको हुँ । हामी सबैले सरकारलाई खबरदारी गरिरहने हो भने देशका विभिन्न समस्या समाधान हुन्छन् जस्तो लाग्छ ।